पीस शिक्षा ग्लोबल नलेज क्लीयरिंगहाउस - शान्ति शिक्षाको लागि वैश्विक अभियान
पीस शिक्षा ग्लोबल नलेज क्लीयरिंगहाउस
पीस शिक्षा ग्लोबल नलेज क्लीयरिंगहाउस विश्वको सबैभन्दा ठूलो र नियमित रूपमा अद्यावधिक गरिएको श्रोत शिक्षाको संकलन हो।
क्लियरिंगहाउस प्रयोगको लागि र बारे सुझावहरू
शान्ति शिक्षा पाठ्यक्रम, समाचार, अनुसन्धान, रिपोर्टहरू र विश्वव्यापी पीस शिक्षा तथा यसको सदस्यहरूका लागि ग्लोबल अभियानले क्युरेट गरेको अध्ययनको डाटाबेसको साथ, क्लियरिhouseहाउस अनुसन्धानकर्ताहरू, नीति निर्माताहरू, दाताहरू, र दाउदहरूको लागि जाने ज्ञान केन्द्र हो। चिकित्सकहरु।
क्लियरिंगहाउस प्रयोग गर्दै
यसलाई खोल्न संसाधन शीर्षक क्लिक गर्नुहोस्!
खोज्न योग्य / छनौट योग्य फिल्टरहरू
तपाई क्लियरिhouseहाउसलाई टेक्स्ट बक्स प्रयोग गरी खुला खोजी प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। थप रूपमा, तपाईले तीन खोजी गर्न योग्य र छनौट योग्य फिल्टरहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ:
विभाग स्रोतको प्रकार वर्णन गर्नुहोस्। त्यहाँ करीव २० मुख्य कोटीहरू छन्, पाठ्यक्रम, समाचार, रिपोर्टहरू, राय, र अनुसन्धान सहित।
ट्याग स्रोतको ध्यान वर्णन गर्नुहोस्। धेरै जसो प्रविष्टिहरूका धेरै ट्यागहरू हुन्छन्। हाल, त्यहाँ +००+ ट्यागहरू छन्, # मानव अधिकारदेखि # ट्रान्सफॉर्म्याटिभ शिक्षाको लागि #Yout Peacebuilders मा शीर्षकहरूको दायरा कभर गर्दै।
देश / विश्व क्षेत्र देश / देशहरू वा विश्वको स्रोत क्षेत्रको केन्द्रित गर्दछ। विश्व क्षेत्रहरू सबै CAPS मा देखा पर्दछ।
करीव १ 1800०० हालका प्रस्तुतीकरणहरू, र -०- new० नयाँ संसाधनहरू मासिक रूपमा थपिएपछि क्लियरिhouseहाउस निरन्तर विस्तार हुँदैछ। क्लियरिhouseहाउस पनि प्रगतिमा छ। हाम्रो स्वयम्सेवक टोली कडा मेहनत गरीरहेको छ कि मुख्य विषयवस्तुहरू र देशहरूका साथ लेखहरूलाई "ट्याग" गर्न डाटाबेसलाई अधिक खोजीयोग्य र अनुसन्धानकर्ताहरूका लागि कार्यात्मक बनाउन। जुलाई १, २०२० सम्म हामीले हाम्रो सामग्री संग्रहको लगभग आधा "ट्याग" गर्यौं। हामी नयाँ सामग्री थप्न मद्दत गर्न स्वयम्सेवकहरूको खोजीमा रहन्छौं (हामीसँग १००+ स्रोतहरू थप गर्न तयार छन्)। यदि तपाईं यस परियोजनालाई समर्थन गर्न स्वयम्सेवा गर्न चाहनुहुन्छ भने, र यदि तपाईंसँग केही आधारभूत वेबसाइट (वर्डप्रेस) अनुभव छ भने, हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्.
शान्ति शिक्षाका लागि ग्लोबल अभियानले आफ्ना सदस्यहरूलाई क्लियरिhouseहाउसमा समाचार, अनुसन्धान, पाठ्यक्रम, रिपोर्ट र विश्लेषणमा योगदान पुर्‍याउन आमन्त्रित गर्दछ। यहाँ उनीहरूले यी योगदानहरू प्रस्तुत गर्नुका साथै तिनीहरूलाई अभियान वेबसाइटमा साझेदारी गरिनेछ, हाम्रो ईमेल सूची मार्फत वितरित गरिनेछ, र सोशल मिडियामा पोष्ट गरिनेछ। यहाँ क्लिक गर्नुहोस् तपाइँका संसाधनहरू साझा गर्न र क्लियरिhouseहाउसमा योगदान दिन.
देश / विश्व क्षेत्र